Michael Owen Oo Saadaal Ka Bixiyay Kulanka Barnsley Vs Chelsea FC Ee Koobka FA Cup
HomeFalanqeynta KulamadaMichael Owen oo saadaal ka bixiyay kulanka Barnsley Vs Chelsea FC ee koobka FA Cup
Michael Owen ayaa saadaalinaya in Chelsea FC ay xaqiijin doonto guushii 2-0 ee ay ka gaareen Barnsley ee wareega shanaad ee FA Cup ee ka dhacaya Oakwell Stadium Caawa.
Blues ayaa isha ku heysa inay guuleysato kulankeedii ugu horreeyay ee FA Cup-ka ee uu leyliyo tababare Thomas Tuchel ka dib markii tababaraha Jarmalka uu qabtay shaqada kooxda galbeedka London bishii hore.
Tuchel ayaa ururiyey 10 dhibcood afartiisii ​​kulan ee ugu horreysay Premier League ee uu leyliyo Blues ka dib guulihii is xigxigay ee ay ka gaareen Burnley, Tottenham Hotspur iyo Sheffield United.
Weeraryahankii hore ee Liverpool FC Owen ayaa taageeraya kooxda Chelsea FC si ay guul raaxo leh uga gaaraan kooxda Barnsley ee wareega shanaad ee FA Cup habeenka khamiista.
“Ilaa iyo haatan waxa ay aheyd, waa wax u fiican Thomas Tuchel markii uu joogay Chelsea,” Owen ayaa u sheegay BetVictor .
Chelsea FC ayaa 4-0 kaga badisay Morecambe ciyaar ka tirsaneyd wareega seddexaad ee FA Cup ee ka dhacday Stamford Bridge ka hor inta uusan Lampard kormeerin guushii 3-1 ee ay ka gaareen Luton Town wareega afaraad kulankiisii ​​ugu dambeeyay ee uu leyliyo kooxda ka dhisan galbeedka London.
Blues ayaa la ciyaari doonta Newcastle United kulankooda soo socda ee Premier League ee Stamford Bridge habeenka Isniinta.